Kudzidza kwemuchina zvakare kunopa chinobuda chinogoneka kugona kuwana ruzivo pane vatengi vebhizinesi. Nekudaro, kutorwa nemafemu eB2B haisati yasimuka. Kunyangwe kukura kuri kuwedzera kufarirwa kwekudzidza kwemuchina, kuchine zvakawanda zvekuvhiringidzika nezve kuti zvinokwana sei mukati mekunzwisisa ikozvino B2B vatengi. Saka ngatijekesei izvo nhasi.
Nekushandisa muchina kudzidza pane ese mutengi dhata yatinotora kuburikidza nezviito zvavo nemawebhusaiti edu, vatengesi vanogona kukurumidza kubata nekunzwisisa kwevatengi hupenyu hwekutenga, musika mune chaiyo-nguva, kugadzira kuvimbika mapurogiramu, fomu yakasarudzika uye inoenderana kutaurirana, kuwana vatsva vatengi uye chengetedza vatengi vakakosha kwenguva yakareba.
Kudzidza kwemuchina kunobvumidza vatengesi veB2B kuti vatore zvinotungamira zvemhando yepamusoro kubva pawebhusaiti vasingade kuti vapedze mafomu ekunyoresa. Semuenzaniso, kambani yeB2B inogona kushandisa kudzidza kwemuchina kuongorora maitiro ewebhusaiti yemushanyi uye nekupa zvirimo zvinonakidza munzira yakasarudzika panguva yakakodzera.